China 35khz 800w Plastic Ultrasonic Abù ịgbado ọkụ Machine ụlọ ọrụ na-emepụta | Ike
5kg Na Totall
plastic ultrasonic ntụpọ ịgbado ọkụ igwe
35khz ultrasonic ntụpọ ịgbado ọkụ igwe
800w ultrasonic ntụpọ ịgbado ọkụ igwe
Kọmpat handheld ultrasonic ịgbado ọkụ igwe nke Car n'ime ime ụlọ ntụpọ ịgbado ọkụ
Ultrasonic plastic ịgbado ọkụ igwebụ a ịgbado ọkụ na ngwá mepụtara na ubi nke plastic ịgbado ọkụ, ụlọ ọrụ na-ezo dị ka ultrasonic plastic ịgbado ọkụ igwe obere. Ngwaọrụ na-ekpo ọkụ Ultrasonic bụ teknụzụ dị elu maka ịgbado ọkụ ngwaahịa ngwaahịa plastic. Kindsdị ihe oriri dị iche iche esiri esi na ultrasonic ịgbado ọkụ. Mgbe ị na-ekpo ọkụ ngwaahịa plastik, etinyela ihe ọ bụla, fillers ma ọ bụ ihe mgbaze, ma ọ bụ rie nnukwu okpomọkụ .Ọ nwere uru nke ịrụ ọrụ dị mfe, ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ, ike ịgbado ọkụ na arụmọrụ dị elu. Ya mere, ndị ultrasonic ịgbado ọkụ technology ka na-eji ọtụtụ ebe.
Mgbe etinyere ultrasonic wave na thermoplastic plastic contact contact, ọ ga-ewepụta iri puku kwuru iri puku nke elu-ugboro ugboro vibrations kwa nke abụọ. Kinddị ụdị ịma jijiji na-adịkarị elu. A na-ebufe ume ultrasonic na mpaghara ịgbado ọkụ site na mpempe akwụkwọ ịgbado ọkụ dị elu. Thekwado ọkụ na-ekpo ọkụ nwere nnukwu nguzogide mkpuchi, yabụ nnukwu okpomọkụ mpaghara nwere ike ime. Ọzọkwa, n'ihi nrụrụ ọkụ na-adịghị mma nke plastik, enweghị ike ịhapụ ha n'oge ma gbakọta na mpaghara ịgbado ọkụ, nke mere ka akụkụ kọntaktị nke plastik abụọ ahụ gbazee ngwa ngwa, ma mgbe etinyere ụfọdụ nsogbu, ha jikọtara n'ime otu. Mgbe ultrasound na-akwụsị ịrụ ọrụ, hapụ nrụgide ahụ ka ọ dị maka sekọnd ole na ole iji mee ka ọ sie ike ma mepụta, nke mere na etinyere sel siri ike dị ike iji mezuo ebumnuche nke ịgbado ọkụ, na ike ịgbado ọkụ nwere ike ịdị nso na ike nke akụrụngwa. . Ogo nke ultrasonic plastic ịgbado ọkụ na-adabere na ihe atọ nke transducer ịgbado ọkụ mpi njupụta, etinyere mgbali na ịgbado ọkụ oge. Enwere ike gbanwee oge ịgbado ọkụ na nrụgide mpi ịgbado ọkụ. A na-ekpebi ọnụọgụ ahụ site na transducer na mpi ahụ. Enwere uru dabara adaba maka mmekọrịta nke ọnụọgụ atọ a. Mgbe ike gafere uru kwesịrị ekwesị, agbaze agbaze nke plastik buru ibu, ihe a na-agbanye ọkụ na-adị mfe nrụrụ; ma ọ bụrụ na ume dị obere, ịgbado ọkụ adịghị mfe, na nrụgide etinyere enweghị ike buru oke ibu. Nsogbu a kachasị mma bụ ngwaahịa nke njedebe ogologo nke akụkụ welded na nrụgide kachasị mma kwa 1mm nke nsọtụ.
Nke a switchable ultrasonic ntụpọ ịgbado ọkụ akụrụngwa nwere ike kpamkpam ịgbanwee n'etiti abụọ na-ejide ụzọ
Pistol ụdị ultrasonic ntụpọ ịgbado ọkụ igwe: Emere udi a dika ergonomics. Ntinye mmalite mmalite nke ultrasonic dị na akpalite nke egbe, nke dị mma maka ibuli ma jiri ya. Ọ dabara adaba maka arụmọrụ ịgbado ọkụ ma ọ bụ nke ikuku.Nnennen-jide ultrasonic ntụpọ welder: Thedị bụ nhazi tube-ogologo. Ntinye mmalite mmalite nke ultrasonic dị na mpụta nke tube-ogologo, nke dị mma maka ịgbado ọkụ na-ebu aka.
Aluminom Alloy Horn Ultrasonic Abù Welder 35kh ...
35khz Portable Ultrasonic ịgbado ọkụ Equipment Ult ...
Manual Ultrasonic ịgbado ọkụ Machine maka ụda ins ...